Meleteriga huwanta iyo ururka Al-shabaab oo dagaal khasaare badan xalay ku dhexmaray Mahadaay – Radio Daljir
Meleteriga huwanta iyo ururka Al-shabaab oo dagaal khasaare badan xalay ku dhexmaray Mahadaay
Oktoobar 2, 2013 3:45 b 0
Mahadaay, October 2, 2013 – Ciidamada huwanta ah iyo ururka Al-shabaab ayaa xalay ku dagaalamay deegaanka Mahadaay ee gobolka shabeelaha dhexe, halkaas oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo AMISOM oo dhowaan la wareegay.
Hal askari ayaa ku dhintay Afar kalena waa ku dhaawacmeen dagaalka xalay ka dhacay degmada Mahadaay ee shabeelaha dhexe, kadib markii ay weerar culus deegaanka ku soo qaadeen ururka Al-shabaab.
Dagaalka xoogiisa ayaa ka dhacay gudaha degmada Mahadaay ee isla shabeelaha dhexe, iyadoo khasaaraha ugu badan uu soo gaaray dhinacyada dagaalamay, sidaas waxaa sheegay dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay.
Dagaalka Mahadaay ayaa ah kii ugu cuslaa ee ka dhaca degmada tan iyo markii ay dhowaan ururka Al-shabaab la wareegeen Mahadaay shabeelaha dhexe.
Soomaaliland oo cadaysay in aysan marnaba ka noqon doonin mowqifkooda goono isu-taaga
Madaxweyne Uhurru oo si kulul ugu hadlay afduubka dhadhaab loogu gaysto muwaadiniinta Kenya